नेकपामा छाेरा – छोरीलाई ‘तँ’ भन्न नपाइने ! बिहेमा पनि कडाइ – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / नेकपामा छाेरा – छोरीलाई ‘तँ’ भन्न नपाइने ! बिहेमा पनि कडाइ
नेकपामा छाेरा – छोरीलाई ‘तँ’ भन्न नपाइने ! बिहेमा पनि कडाइ
काठमाडौं , ६ माघ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी कार्यकर्तालाई ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार अबउप्रान्त नेता कार्यकर्ताले कसैलाई पनि तँ भन्न पाउने छैनन् ।
६ माघ २०७६, सोमबार ०९:५८
Previous: नेपाल प्रहरीकाे गाडीमा ट्राफिक प्रहरीकाे ‘ह्विल लक’
Next: मानवअधिकार संगठनको अध्यक्षमा आचार्य चयन